Tag Archive for "एनएमबी" - बैंकहरूको लापरबाहीका कारण १ अर्ब ५ करोड ऋण डुब्ने खतरा ! हेर्नुहोस् कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्त (आठ महिना)सम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ अर्ब ५ करोड ८९ लाख ५४ हजार १९२ लाख रुपैयाँ ऋण डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऋणीसँगको मिलेमतो, बिनाधितो तथा कमसल धितोका कारण ऋण उठाउन नसकेपछि पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ । न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकहरूको लापरबाहीका कारण कमसल धितोमा ऋण प्रवाह ग... थप पढ्नुहोस्
युनिभर्सल पावर कम्पनीका शेयरधनीलाई झण्डै १० अंकको घाटा ! काठमाडौं । हिजो ओरालो लागेको शेयर बजारमा आज भने सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६.४३ विन्दुले बढेर एक हजार १४९.९९ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.४५ विन्दुले बढेर २४४.८१ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कारोवार रकममा समेत बृद्धि भएको छ । कूल १७१... थप पढ्नुहोस्
एनएमबी बैंकमा खाता खोल्दा १० लाखको निशुल्क बीमा तथा बिनाधितो १० लाखसम्म ऋण सुविधा
काठमाडौं । बेलायतबाट दोस्रोपटक बैंक अफ द इयरको सम्मानप्राप्त गरेको एनएमबी बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदर मै सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भएको छ । समृद्ध नेपालको लागि बैंकिङको लक्ष्य लिएको एनएमबी बैंकले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले बिनाधितो सात प्रकारका कर्जा प्रदान गर्ने भएको हो । वर्तमान सरकारद्धारा जारी “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार... थप पढ्नुहोस्